Ciidan gurmad ah oo loo diray Mukhtaar Roobow -
Ciidan gurmad ah oo loo diray Mukhtaar Roobow
Warar ka soo baxaya Gobolka Bakool ayaa sheegaya in Maamulka Koonfur Galbeed, ay ciidan gurmad ah u direen Mukhtaar Roobow Cali, oo xilligan la sheegay inay hareereeyeen dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali iyo ciidan uu wato, ayaa ku sugan miyiga deegaanka Abal, oo qiyaastii 18km u jirta Magaalada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool, waxaana la sheegay in deegaankaasi ay ku hareereeyeen dagaal-yahanada Al Shabaab.
Ciidamada Koonfur Galbeed, ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray deegaanka Baano, oo 8km u jirta deegaanka uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Cali. Ujeedada ciidamadan ayaa ah inay gacan siiyaan Abuu Mansuur.
Rooboow, ayaa waxaa xilligan la soo sheegaya in deegaankaasi ay ku wehlinayan ciidan ku heyb ah. waanahalka uu ku dhashay.
Mareykanka, ayaa toddobaadkii hore la sheegay in liiska argagixisada uu ka saaray Abuu Mansuur, ka dib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in wada hadalo uu kula jiro Dowladda Federaalka Somaliya.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan uu Abuu Mansuur ka dhaadhiciyay in uu wada hadalo la furo Dowladda Somaliya.
Related Items:Featured, Jubbaland, Mogadishu, News, President of Somalia, Puntland, Somalia, world
Kenya’s opposition leader Raila Odinga vows to pull soldiers from Somalia